Basa - Funlandia
Isu tisu takanakisa pane zvatinoita, uye ndiyo sevhisi.
Funlandia ine makore eruzivo nehunyanzvi mukubatsira vatengi kuronga nekugadzira mapurojekiti avo nenzira inogoneka.Izvi zvinosanganisira kuongororwa kwezvinhu zvakasiyana semusika, kusarudzwa kwesaiti, bhizinesi uye mapoka evashandisi.
Isu tinosarudzira anonyanya kukodzera paki mapurojekiti uye zvivakwa zvinoshanda kwauri, uye kuronga iyo yese ine simba nzvimbo kurongeka uye chinzvimbo chemidziyo.
Funlandia inoisa ruzivo rwemushandisi kumberi uye iri mukukurukurirana kwepedyo nevatengi kugadzira pfungwa dzinoyevedza.Isu tinotarisisa izvo zvizere nechinangwa chekuronga iyo pfungwa yekubatsira kwenguva refu kwevatengi vedu.
Dhirowa yakadzama inogadzirwa kune chimwe nechimwe chigadzirwa kuti ive nechokwadi chekumisikidzwa munzvimbo uye kunyatsobatanidzwa pakati pezvigadzirwa uye pakati pezvigadzirwa nenzvimbo yekuwana mhedzisiro inoenderana zvizere nedhizaini yedhizaini.
Isu tinogadzira inooneka esthetics kuburikidza ne graphic dhizaini yakavakirwa pane akasiyana thematic zvinhu, mavara, nezvimwe kusimbisa iyo yakazara dingindira uye stylization yeimba yekutamba yemukati.
Isu tinotora maitiro emidziyo yekutengeserana, shandisa hunyanzvi uye epamberi dhizaini, uye tinotevera kuwiriranisa pakati pedhizaini yekutamba uye dhizaini yepakati kugadzira nzvimbo inonyudza yekunakidzwa.
Mamaneja edu epurojekiti anovimbisa kuti mazano ekugadzira anoteverwa uye anoteedzerwa panguva yekugadzira, kugadzira uye kuisa.Ivo vanoteerera kune zvemukati uye kudzora kwemhando mune ese maficha kubva kune ruzivo kusvika kune yakazara pfungwa.